लकडाउनको समयमा तनावबाट मुक्त रहन के गर्ने ? – Gorkhali Voice
लकडाउनको समयमा तनावबाट मुक्त रहन के गर्ने ?
२०७६, ११ चैत्र मंगलवार १८:५५
काठमाडौं : नेपालमा सरकाले चैत्र ११ गतेदेखि चैत्र १८ गतेसम्मलाई लकडाउन गरेको छ । विश्‍वभर कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएपछि अहिले नेपालमा लकडाउन लागू गरेको छ।
लामो समय घरमै बस्नुपर्ने भएपछि धैरैजसोलाई मानसिक तनावले सताउन थालेको छ।यतिबेला मुलुकभरका स्कुल, कलेज र संघ संस्थाहरू पनि बन्द छन्।कतिपय मानिस घरमै बस्नुपर्दाको पीडा साथै एक प्रकारको भय सृजना भएको छ, सामाजिक संजालमा कतिपय मानिसले पीडा पोख्न थालेका छन्। कोही कस्तो समय आइलागेको भन्दै आफन्तसँग त्रास बाँडिरहेका छन्। यतिबेला सबैमा एकै किसिमको भय सृजना भएको छ कसरी बाँच्ने।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म विश्वभर ३ लाख ८२ हजार १२६ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ।
नेपालमा हालसम्म दुईजनामा (COVID-19) कोरोना भाइरस देखिएको छ। एकजनाको उपचारपछि संचो भएको अवस्था छ। छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि कोरोना संक्रमित देखिएका छन्। यस्तो बेलामा देशका हरेक नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु जरुरी हुन्छ। आफूलाई स्वस्थ राख्न नियमित सरसफाईदेखि खानपानशैलीमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ। तल केही टिप्स दिइएका छन्। यसले पनि तपाईको स्वास्थ ठीक राख्न केही मद्त गर्नेछ।